I-Sony Ericsson Xperia X10 eneVodafone Spain, amaxabiso | I-Androidsis
antocara | | Abasebenza ngefowuni, Sony
Ukusuka xatakamovil ezahlukileyo ziza kuthi Amaxabiso uSony Ericsson Xperia X10 aya kuba nawo ngeVodafone eSpain. Ezi xabiso ziyafana nezo ze sele ipapashiwe iHtc Legend. Kuzo zonke iimeko, kuyanyanzeleka ukuba uthengise idatha ngexabiso le- $ 15 ngenyanga enyanzelekileyo ukuba igcinwe ubuncinci iinyanga ezi-6 zokuqala.
Njengokuba kuhlala kunjalo, ixabiso liyahluka ngokuxhomekeka ekubeni senza ukuthwala, ubhaliso olutsha okanye ukufuduka. Kananjalo kuzo zonke iimeko ukuzibophelela kokuhlala eVodafone ziinyanga ezili-18 kunye nokuzinikela kwinqanaba lelizwi elikhethiweyo ziinyanga ezi-6.
Ngobhaliso olutsha ixabiso li- € 249, i-199 okanye i- € 99 kuxhomekeke ekubeni sikhetha iqondo lezwi ngendleko zenyanga ze- $ 9, i- € 19,20 okanye i- € 59,99.
Ukuthwala, ixabiso liyi- € 149, i- € 49 okanye i- € 0 kuxhomekeke ekubeni sikhetha inqanaba lelizwi ngendleko zenyanga ze- € 9, € 19,20 okanye i- € 59,99.
Ukufuduka, ixabiso li- € 199, kuwo onke amaxabiso ezwi, nokuba lixabisa ngenyanga i-9, i- € 19,20 okanye i- € 59,99.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » I-Sony Ericsson Xperia X10 eneVodafone Spain, amaxabiso
UPedro Garcia sitsho
Inyani yile yokuba inokuba sisiphelo endisikhethileyo, ukuba akunjalo kuba, njengoko ubuyitshilo kwiposti yangaphambili, ayisiyi-multitouch.
Ukongeza kuhlobo lwe-Android
Phendula kuPedro Garcia
Kwaye xa ithengiswa!
Ngokwolwazi oluvela kwivenkile yevodafone, bandixelele ukuba bazakundilinda de kube ngoMvulo, nge-5 ka-Epreli, ngokuqinisekileyo banoku-odola. NgoMvulo ndiya khona nakanjani!
Phakathi kweMultitouch kunye nescreen, akukho Amoled ilahlekileyo kakhulu.
Umguquleli wolwimi lwezilwanyana, uGoogle uyasimangalisa kwakhona
I-Asphalt 5, iGameloft idlala yomelele